Maitiro ekudzokera kuGoogle Chrome 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Maitiro ekudzokera kuGoogle Chrome
Kwechinguva ikozvino, waona kuti zvinongedzo zvaunodzvanya kuvhura mubrowser kunze kwe Google Chrome. Iwe haurangariri zvakajeka uchichinja iyi sarudzo uye uri kutya kuti waita imwe diki "njodzi" asi kupfuura zvese, iwe hauna zano rekudzokera kumashure!
Zorora uye usavhunduke, izvi zvinoitika zvakajairika: zvinogona kuitika, muchokwadi, kuti mushure mekuita gadziriso yesystem uye / kana kumisikidza bhurawuza nyowani pane chako chimbo, chinotsiva chakamboshandiswa, chakazara otomatiki. Nekudaro, izvi hazvireve kuti hazvigoneke kudzima iyi mamiriro, zvakapesana!
Pese padzidziso iyi, richava basa rangu kutsanangura maitiro ekudzokera kuGoogle chrome mushure mekuchinja kusingazivikanwe kwebrowser kuri kushandiswa paWindows, macOS, Android uye iOS / iPadOS: Ini ndinovimbisa kuti, kunyangwe zvingaite sekunge chiitiko chakapusa kuita. Kuverenga kunofadza uye rombo rakanaka mune zvese!
Maitiro ekudzokera kuGoogle Chrome paPC
Maitiro ekudzokera kuGoogle Chrome pane mafoni uye mahwendefa
Wakambochinja netsaona komputa yako default browser chirongwa, uye zvino ungade here kutora matanho ako uye kutanga kushandisa Google Chrome zvakare? Kuita izvi kuri nyore kupfuura zvazvinonzwika: muzvikamu zvinotevera zvechitsauko ichi ini ndichatsanangura maitiro ekuenderera paWindows uye macOS.
kubudikidza dzokera kuGoogle chrome su Windows, tanga watanga Internet browser uye kana ichivhura, tinya pane ⋮ bhatani riri kumusoro kurudyi uyezve pane chinhu Zvirongwa, iri mumenu inovhura.
Kana izvi zvaitwa, peta pasi kadhi iro raunokurudzirwa, kusvikira wawana chinhu Default browser, cindezela bhatani seta seChimiro uye, kana zvichidikanwa, nezwi Vhura "Default Applications", iri mumeseji yambiro pazasi. Kana iwe ukashandisa Windows 7, mushure mekubaya bhatani rataurwa pamusoro, Google Chrome ichabva yagadzwa seye default browser.
Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchishandisa Windows 10 ari Windows 8.1, iyo pani yakatsaurirwa kugadzirisa iyo default system kunyorera inofanira kuvhura: kana izvi zvikaitika, tsvaga iwo mavara Web browser, Dzvanya zita yebrowser iyo inoonekwa ipapo pazasi (semuenzaniso, Microsoft Edge), ipapo mune sarudzo Google Chrome iri mune inotevera menyu uye, kana zvichibvira, mune chinhu Chinja hazvo.
Neimwe nzira, iwe unogona kufonera iyo imwechete pani zvakananga kubva ku tanga menyu de Windows 10: vhura iyo yekupedzisira nekudzvanya pane iyo icon mureza inoonekwa mukona yezasi yekuruboshwe kwechiratidziri, sarudza chinhu Zvirongwa wobva wadzvanya pazvinhu zvacho Kushanda mi Zvishandiso zvekushandisa (Kuruboshwe).
Su Windows 8.1pachinzvimbo, iwe unofanirwa kufona kuisa runako kudzvanya kiyi yekubatanidza Ndikunde + iniClick on chinhu Chinja marongero ePc iri pazasi uye enda kuzvikamu Kutsvaga uye kushandisa mi Kugadziriswa kwekugadziriswa (Kuruboshwe).
chitsamba- Kana iwe uri kushandisa Windows 7 kana Windows 8.1 uye haugone kuseta Chrome seye default browser nekutevera mirairo yandakakupa izvozvi, vhura iyo Panodhi yekudzora daidza iyo kubva kumenyu Kutanga, tinya pazvinhu zvacho Zvirongwa mi Gadzira zvirongwa zvekutadzaClick on chinhu Google Chrome kugara muchikamu chekuruboshwe chehwindo uye pakupedzisira mune sarudzo Gadza chirongwa ichi sezvazviri. Mamwe ruzivo pano.
Kana yako iri Mac, iwe unogona kuseta nyore (kana kumisazve) Chrome seye default browser nekuita zvakananga kubva ku browser marongero. Ndinoifarira? Ndichakutsanangurira ipapo ipapo.
Kuti utange, tangisa iyo Google browser nekuishandisa kubva ku Kutanga pad kana kubva pafolda Applications paMac, tinya bhatani in riri kumusoro kurudyi uye sarudza chinhu Zvirongwa mumenyu inovhura. Zvino pfugama pasi iyo nyowani tebhu yakaratidzwa kwauri, tsvaga mazwi acho Default browser uye pakupedzisira tinya mabhatani Gadza default browser mi Shandisa "Chrome". Ndizvo!
Neimwe nzira, iwe unogona kuwana iwo iwo mhedzisiro nekuita pane macOS marongero: saka, vhura iyo Zvido zvemaitiro kudzvanya pane iyo D icongiya in the Dhivha kana kana usiri kuiwana, tinya pane menyu apuro (chiratidzo che Bitten apuro iyo inogara mukona yekumusoro kuruboshwe kwechiratidziri, mune Mac menyu bar) uyezve mune chinhu Zvido zvemaitiro rinogara mukati make.
Kana iyo skrini nyowani ichivhura pane desktop yako, tinya iyo icon General uye tsvaga icho chinyorwa mune inotevera paneli Chaizvoizvo web browser; pakupedzisira, shandisa inoenderana inodonhedza menyu kusarudza chinhu Google Chrome Uye ndozvazviri: shanduko yacho iripapo ipapo uye hapana imwe yekumisikidza inodikanwa
Zvisinei nesisitimu inoshandiswa, pese paunodzvanya pane chinongedzo kana icon pawebhusaiti, zvirimo zvichavhurwa muGoogle browser; kana paine kusahadzika, unogona kukurumidza kudzokera kuSafari, kana chero chero bhurawuza raunoda, uchiita kubva kuSystem Preferences, sezvinoonekwa pamusoro.
Iwe waisa bhurawuza idzva pa Android uye nekukanganisa iwe unozvimisikidza seyakagadziriswa sarudzo yekuvhura ma link Sisitimu yekumisazve reset Safari seye default browser mukati iOS ari iPadOS? Usatombo kunetseka, kukwanisa kushandisa Google Chrome seyako default navigation app zvakare, ingo mhinya "mabhatani kurudyi": pazasi iwe unowana zvese zvakatsanangurwa zvakadzama.
Kugadzirisa zvakare Google Chrome seye default browser app mu Android, enderera seinotevera: vhura iyo Zvirongwa system inoshanda nekubata iyo icongiya yakaiswa pachiratidziro chemumba kana mudhirowa yemidziyo, bata chinhu Zvikumbiro uye zviziviso uye usvike kuchikamu Zvishandiso zvekushandisakubata sarudzo yakakodzera. Pakupedzisira, bata mazwi acho Yekushandisa browser uye isa mucherechedzo padyo nemukova we Chrome, inoonekwa pane inotevera skrini.
Mune zvimwe zviitiko, mazita ezvinhu zvemenu uye sarudzo dzinoonekwa pane chishandiso dzinogona kusiyana zvishoma neiya andambotaura nezvayo, nekuda kwekusiyana pakati pezvakasiyana zvinyorwa zveApple.
Semuenzaniso, kana uine Xiaomi smartphone yakagadzirirwa MIUI ROM, unofanirwa kuita neimwe nzira yakati siyanei: tanga wavhura menyu Zvirongwa> Zvishandiso> Manage zvinoshandiswa kubva kuApple, tinya bhatani (⋮) iri kurudyi kumusoro uye kubata chinhu Zvishandiso zvekushandisa, achigara ipapo; pakupedzisira, bata chinhu Browser uyezve pane icon ye Chrome, kuti umise seyakasarudzika sarudzo.
Matanho ekutevera dzokera kuGoogle chrome pane iPhone nePadad zvakafanana neiya atoonekwa kare kuApple: kutanga, vhura iyo Zvirongwa yeiyo inoshanda sisitimu nekubata chiratidzogiya iri pachiratidziro chemumba kana muibhurari yeApp / iOS yeAppOS uye tora chinhu Chrome, kuti uwane mamwe marongero ekushandisa kwekushandisa.
Zvino, bata mazwi Default browser app uyezve muzita re Chrome, Inoonekwa pane inotevera paneli, kusarudza bhurawuza uye nekumisikidza seye default browser application. Ndizvo zvose!
Maitiro ekuwana Mortis mahara muBrawl Nyeredzi
Takabiwa here? Dzese nzira dzekuziva